I-Global Mapper, isebenza ne-dgn-Geofumadas
NgoSeptemba, 2009 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Ukufunda ifomathi ye-dgn ngumgangatho kwiinkqubo ezininzi ze-GIS / CAD, kodwa uninzi lwezi (phakathi kwazo ziphindaphindwe nge-GIS kunye ne-gvSIG) zishiyiwe zifunda ifomathi ye-V7. I-AutoCAD kunye neArcGIS sele ziyenzile.
Makhe sibone indlela akwenza ngayo IMapper Global:
1 funda i-DNN V8
Kuyathakazelisa, ukuba iifayile zinokusetyenziswa kwithebhulethi yokongeza .tar, .zip okanye .tgz.
Nje ukuba kukhethwe, le nkqubo ibuza ukuba loluphi uqikelelo abaza kulunikwa. Ezi zinokukhethwa kuluhlu olubanzi, okanye kwifayile .prg, okanye kwifayile ye-.txt enayo. (Ayilwamkeli uqikelelo lwangaphakathi olunikezwe yiMicrostation Geographics)
Emva koko unokuchaza ukwabela uqikelelo olufanayo kuzo zonke iifayile ezikhethiweyo. Unako ukuvelisa ingqikelelo yokunambitha kunye nokugcina njenge .prj ukuyibiza nangaliphi na ixesha. Kunika umdla ukuba xa uvula ifayile ngaphandle kwengqikelelo, igcina eyokugqibela eyabelwe ... ohhhh ewe asibonise khangela izinto ezilula!
Kwiinguqulelo zakutshanje, ifunda i-V8, iinkqubo ezigqithisayo ezifana ne-Manifold GIS kunye ne-gvSIG, kunye nemfuno ekhoyo kule fomathi kwaye zikhona kuphela ezi zimbini phakathi kwazo eziveliswa yi-Microstation.
Isicatshulwa siza njengezinto zenqaku, yiyo loo nto benalo nqaku kwinqanaba langezantsi lasekhohlo. Awunakho ukuhlela izinto, unokuchukumisa okanye ucime okanye uhlele i-vertices, kodwa kuphela kwinqanaba lokujonga.
Into ecaphukisayo yokungenisa into kukuba ukuba izinto zimhlophe kwaye imvelaphi ingumbala omnye, kuya kubonakala ngathi azikho. Ukwenza oku, kuya kufuneka ubeke imvelaphi yombala ongaqhelekanga, oku kwenziwa nge "jonga> umbala ongasemva ..."
2 Iindleko zokuthumela izinto
Ukuthunyelwa kwelinye ilizwe akukubi, kuya kuthumela okubonakalayo kwikhathalogu ye "iziko lolawulo", eyindlela yokubiza umbutho weembono. Yonke into iza kuhamba ngengqikelelo efanayo.
Phakathi kwezona zinto zicaphukisayo, ubungakanani beetekisi. Ukwenza oku, cela ukhethe ubungakanani kwaye kuya kufuneka uzame. Kwimeko yeelebheli zemilo, ziguqulwa zaba ziitekisi kubungakanani obubonakalayo.
Ivumela ukuvelisa i-3D dgn ukuba imephu inexabiso lokuphakama; uze ushiye inketho ukwenzela ukuba izinto ezimhlophe zibonwe zimnyama okanye ngokulandelelana ngokwemvelaphi.
Ikwavumela ukuthumela kwelinye ilizwe kwi-matrix, kulungile kakhulu kwiifayile ezinkulu kakhulu. Oku kwenza ukuba iifayile ezahlukileyo zihambe, kwaye phakathi kwezona zilungileyo, ivumela ukuthumela igridi yesalathiso, enokuthi ibe kulungelelwaniso lwendawo (kubude / kubude) okanye kwi-UTM.
Ukuthunyelwa kwamanye amazwe kuya kuba neengxaki ngezinto eziyinkimbinkimbi, njengoko kwimeko yeemeko ezinemingxuma, ekubeni i-Microstation ukuya kwiinguqulelo ze-V8.5 ilawula le miba njengezinto ezinzima okanye iiseli.
3 Ezinye iindlela
Kufanelekile ukukhankanya ukuba phakathi koqwalaselo olongezelelweyo kungachazwa ukuba xa kuthengiswa ukuguqula iiseli (iiseli, okanye iibhloko) kwiindawo; ukuba akunjalo, kuya kubaxhaphaza njengabavaki.
Inokuchazwa kwakhona ukuba inombolo yombala ingabelwa njengempawu etafileni, eya kubavumela ukuba baxhaswe ngolu hlobo.
Ukuqukumbela, yamkelekile ngokomgangatho. Nangona IMapper Global yenza izinto ezininzi
Post edlulileyo«Ngaphambilini Uphefumulelwe i-2009
Post Next I-Digital Digital LibraryOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-5 ziye kwi "Global Mapper, zisebenza ne-dgn"
Ndinayo i-geoserver leyo xa ibonisa ukuba ungqongqo ayenzi kakuhle, ndibeka isitayela somgca kodwa ibonisa njengamabala. Into eyinqaba kukuba ekubukeni kwembonakalo kubonakala kulungile. Ndinayo i-geoserver kwi-tomcat kwaye xa ibonisa umgca kwi-console ye-tomcat iphuma:
Ububanzi bungaphandle kwemida evumelekileyo.
Enkosi kwakhona ngokucacisa oko. Uvelwano ukuyazi loo nto.
Sifumene ne-Open Design Alliance, kodwa ayisebenzi kunye neeprojekti zeprojekti yamahhala. Yiza, ukuba ukukhulula ulwazi akukho nto.
Ngokubhekisele kwinto yeBentley, senze isicelo sezo specs amatyeli aliqela… kwaye sisalinde into eza kudlula.
Siyabonga ngokucaciswa kwe-Alvaro.
Kwaye ziziphi iindlela ozikhethayo Vula iNdibaniso yoBumbe ?
Ngokweli phepha leBentley, kunokwenzeka ukuba ufikeleleke kumaxwebhu anxulumene nefom ye v8.
«Senze uxwebhu oluchaza ngefomathi yefayile ye-DGN yemveli esetyenziswa sisizukulwana seMveliso yeV8. Le fomati yefayile ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yifomathi ye «V8 DGN». Umxholo wexwebhu lwe-V8 DGN yoCaciso lwanele ukuvumela umqulunqi onobuchule ukutolika idatha ngaphakathi kwifayile yeV8 DGN eyakhiwa yiMicrosoftStation kunye neenkqubo zayo. "
Ukufunda i-DGN okanye enye indlela yokushicilela, enje nge-DWG, akukho malunga nokufumana okanye ukungakufumani. Ziziifomati ezivaliweyo, ngaphandle kwenkcazo evulekileyo, kwaye ke yiyo kuphela indlela yokufumana isoftware yobunikazi bokuzifunda (kunye / okanye ukubhala) ukufikelela kwisivumelwano (soqoqosho) sendlu yentengiso esemsebenzini. Ukusuka kwisoftware yasimahla, ekuphela kwento enokwenziwa kukuba iinjineli eziguqukayo, zibiza kakhulu kwaye oko akuqinisekisi naziphi na iziphumo ezilungileyo. Kwi-gvSIG sifunda, umzekelo, i-DWG 2004, into engafunyanwanga kwenye isoftware yasimahla, kodwa inzame yotyalo mali inkulu kakhulu.
Yintoni ekufuneka iphakanyiswe kuzo zonke iindawo kukusetyenziswa kweefomati ezivulekile, ezifana ne-GML, kwaye ngokukhawuleza ichithe ukusetyenziswa kweefomati ezivaliweyo, ukuguqulwa unyaka nonyaka, kunye nenjongo yodwa yokugcina ukuthengiswa kwemarike.